Fanodinana vy - Mestech Industrial Limited
Fanodinana vy (Metalworking), dia karazana haitao fanodinana sy hetsika famokarana fanaovana lahatsoratra, faritra ary singa avy amin'ny akora vy.
Ny faritra metaly dia be mpampiasa amin'ny milina sy fitaovana isan-karazany. Ny faritra metaly dia manana fitoniana, tanjaka sy hamafin'ny dimensional, toetran'ny fanoherana ny hafanana avo sy ambany ary ny fitondran-tena, izay matetika ampiasaina hanamboarana ampahany. Raha ampitahaina amin'ny faritra plastika dia misy karazana fitaovana maro ho an'ny vy, toy ny firaka aliminioma, firaka varahina, firaka zinc, vy, firaka titanium, firaka magnesioma, sns., Samy hafa ny fananany. Anisan'izany ny ferroalloy, ny firaka alimo, ny firaka varahina ary ny firaka zinc dia matetika ampiasaina amin'ny vokatra indostrialy sy sivily. Ireo fitaovana metaly ireo dia samy manana ny toetrany simika sy simika, ny firafitra sy ny endrik'ireo teknolojia fanodinana faritra vy dia misy fahasamihafana lehibe.
Ny fomba fanodinana lehibe ny ampahany amin'ny vy dia: fametahana, fametahana, fanariana marina, fametavetana vovoka, famolahana tsindrona vy.
Ny milina dia ny dingan'ny fanovana ny refy ankapobeny na ny fahombiazan'ny workpiece amin'ny alàlan'ny karazana fitaovana mekanika. Raha ny fahasamihafana amin'ny fomba fanodinana azy dia azo zaraina amin'ny fanapahana sy ny fanodinana tsindry izy io. Ny stamping dia karazana fomba fanodinana endrika izay mampiasa press sy maty mba hananana hery ivelany amin'ny takelaka, esorina, fantsona ary mombamomba mba hamoahana déformation na fisarahana plastika, mba hahazoana ny endrika sy haben'ny takelaka ilaina (ampahany nohomboana).
Ny fametrahana mazava tsara, ny metallurgy vovoka ary ny famolahana tsindrona vy dia an'ny fizotran'ny asa mafana. Izy ireo dia miforona ao amin'ny lavaky ny bobongolo amin'ny alàlan'ny fanafanana ny metaly metaly amin'ny hafanana ambony hahazoana ny endrika takiana sy ny habeny. Misy ihany koa ny milina manokana, toy ny: machining laser, EDM, machining ultrasonic, machining electrochemical, machining beam ary machining haingam-pandeha avo lenta. Fihodinana, fikosoham-bary, fametahana, fanariana, fikosoham-bary, machining CNC, fametahana cnc. Izy rehetra dia an'ny milina.
Fitaovana milina fanodinana vy
Fanodinana herinaratra elektrika -EDM
Fampisehoana ny faritra vy:
1. Sombin-by vy: faritra vita amin'ny vy, chromium, manganese ary ny fitaovany.
Sombiny lasitra mazava
Faritra vy vita amin'ny masinina
Fitaovana fandefasana fitaovana
2. Fizarana vy tsyferrous: ny firaka tsyferrous iraisana dia misy firaka aliminioma, firaka varahina, firaka maneziôma, firaka nickel, firaka firapoka, firaka tantalum, firaka titanium, firaka zinc, firaka molybdenum, firaka zirconium, sns.
Trano fonenana maty zinc
Fonony nohitsakitsahin'ny aliminioma
Trano fanariana maty maty aluminium
Ny fizahana ambonin'ny tany dia azo zaraina amin'ny lafiny efatra
1. Fitsaboana ambony mekanika: sandblasting, fipoahana bala, famolahana, familiana, famolahana, fanosotra, famaohana, hosodoko, hosotra, sns.
2. Fitsaboana simika ambonin'ny tany: manga sy mainty, phosphating, pickling, plating electroless amin'ny metaly sy alloys isan-karazany, fitsaboana TD, fitsaboana QPQ, oxidation simika, sns.
3. Fitsaboana amin'ny alàlan'ny electrochemical: fanodinana oksika anodika, polishing electrochemical, electroplating, sns.
4. Fitsaboana maoderina: ny setroka etona simika CVD, ny setroka etona ara-batana PVD, ny implantation ion, ny plating ion, ny fitsaboana amin'ny laser, sns.
Mestech dia manome serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny famolavolana sy ny famokarana ho an'ny faritra vy, ao anatin'izany ny vy, firaka aliminioma, firaka zinc, firaka varahina ary firaka titanium. Mifandraisa aminay raha ilaina.